Kristersson oo saddexda galabnimo la kulmi doona af hayeenka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Ulf Kristersson (M) oo saddexda galabnimo la kulmi doona af hayeenka baarlamanka. sawir: Tomas Oneborg/SvD/TT
Kristersson oo saddexda galabnimo la kulmi doona af hayeenka
La daabacay tisdag 9 oktober 2018 kl 08.37
Gelinka dambe ee maanta saacadda 15:00 ayaa la fileyaa inuu hoggaamiyaha xisbiga Moderaterna Ulf Kristersson uu la kulmo si uu ugu wargeliyo af hayeenka baarlamanka halka ay mareeyso xaaladdiisa abaabulka ee uu ku eegayo dawlad uu soo dhiso.
Halka ay hoggaamiyaha xisbiga Kristdemokraterna Ebba Busch Thor ay weli taagan tahay in la soo dhiso dawlad garab midig ee Alliansen, iyadoona aaminsan in wada hadalladu si habsami leh u socdaan.
– Habka keliya ee tallaabo horay loogu qaadi karo waxay tahay iyada oo hoggaamiyeyaasha xisbiyadu isu muujiyaan kalsooni ballaaran ee wada hadal ee dhexdooda ah. Waana sida xaaladdu ay iminka tahay.
– Waxaan weli ku taagnahay sidii aan gacan uga geeysan lahaa dhismaha dawlad garabka midig ee Alliansen, waxaanan qabaa iney jiraan astaamo ey ku suurtageli karaan, sida ay sheegtay Ebba Busch Thor.
Tallaabadaada labaad maxay noqon?
– Ma joogno iminka xaalad aannu ku eegno tallaabo kale ee la qaado. Xisbiga kristdemokrater ahaan weli waxaa noo muuqda dawlad garabka midig ee Alliansen.
Salaasadii toddobaadkii ina dhaaftay ayay ahayd kolkii Ulf Kristersson loo xilsaarey inuu isku dayo bal inuu baaris ku soo sameeyo habka uu dawlad baarlamanku aanu aqlabiyad kaga soo hor jeedin ku soo dhisi karo. Iyadoona loo cayimey muddo laba toddobaad gaarsiisan, hase yeeshee berito lagu ballansanaa toddobaad kadib inuu xaaladda ku soo wargeliyo af hayeenka baarlamanka.
Hoggaamiyaha xisbiga Moderaterna ayaa tallaabadiisa ugu horreeysaa tahay dawlad garabka midig ee Alliansen oo wada shaqeeyn la yeelata xisbiga Socialdemokraterna, hase yeeshee uu Stefan Löfven ku celceliyay in aanu xisbigiisu taageere u noqon doonin dawlad ey soo dhisaan afarta xisbi ee Alliansen.
Balse sida ay sheegtay hoggaamiyaha xisbiga Kristdemokraterna Ebba Busch Thor ay wakhti hore weli tahay in laga hadlo tallaabada xigta, haddii uu xisbiga Socialdemokraterna ku adkeeysto mowqifkiisa.
Ebba Busch Thor ayaa sheegtay iney madaxda afarta xisbi ee Alliansen si joogta ah u kulmaan, iyadoona ey wadahadalladu u socdaan si habboon.
– Hase yeeshee aanan idin la qeeybsanayn arrimmaha aannu ka wada hadalney ama ka xaajoonno.